Dalxiiska Seychelles iyo Naadiga Med waxay Kor u Qaadaan Meesha Talyaaniga oo dhan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Dalxiiska Seychelles iyo Naadiga Med waxay Kor u Qaadaan Meesha Talyaaniga oo dhan
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Dalxiiska Seychelles ee Talyaaniga
Xafiiska wakiilka dalxiiska ee Seychelles ee Talyaaniga ayaa iskaashi la sameeyay Club Med, isagoo qabanaya dhacdooyin taxane ah oo kor loogu qaadayo Seychelles guud ahaan Talyaaniga ka hor inta aan lagu dhawaaqin in jasiiradaha janada Badweynta Hindiya ay ka mid yihiin 6 goobood iyo 3 dal oo ka baxsan Yurub Muwaadiniinta Talyaaniga ayaa u safri kara .
Marti -gelisay Dalxiiska Seychelles, 30 wakiil oo safar u ah munaasabad kasta ayaa lagu raray buundada qadada iyo bandhigga fiidiyowga ee jawiga meesha loo socdo.
Xiisaha meesha loo socdo aad buu u sarreeyaa tan iyo markii ay dawladda Talyaaniga furtay waddada dalxiiska ee Seychelles.
Dhacdooyinkan taxanaha ah ee qof ahaan ayaa ahaa munaasabadda ugu habboon ee kor loogu qaadayo wacyiga jasiiradaha.
Dhacdadii ganacsi ee ugu horreysay waxaa lagu qabtay Rome Hotel Metropole bishii Sebtember 22, badhtamaha magaalada, waxaa ku xigay mid ka dhacay Naples bishii Sebtember 24 ee Club Rosolino. Dhacdadii ugu dambaysay waxay ka dhacday Hotel NYX ee Milan 28 -kii Sebtember.
Waxa marti galiyay Dalxiiska Seychelles wakiilka suuqgeynta ee Talyaaniga, Danielle Di Gianvito, iyo Agaasimaha Ganacsiga ee Med Med B2B iyo M&E Italy Anne-Laure Redon, 30-ka wakiil socdaal ee munaasabad kasta, oo laga dhex doortay wada-hawlgalayaasha ugu wanaagsan ee Club Med, ayaa lagu raray dul-saaridda qadada iyo bandhigga fiidiyowga ee jawiga ee ujeedka. Waxaa xigay kalfadhiyo isku xirnaan.
Dhacdo macmiil oo ka dhacday Milan ayaa daba -socotay Oktoobar 5 -keedii oo lala kaashaday shabakadda wakaaladda Gattinoni, xafiiskeeda badhtamaha Milan. Munaasabadan ayaa isugu jirtay casho iyo soo bandhigid waxaana ka soo qayb galay macaamiisha qarashka badan ku bixiya wakaalada socdaalka, iyo xubno kale oo ka tirsan shabakada socdaalka.
Xiisaha meesha loo socdo aad buu u sarreeyaa tan iyo furitaankii Dawladda Talyaaniga ee waddada dalxiiska ee Seychelles iyo dhacdooyinkan taxanaha ah ee qof ahaaneed waxay ahayd munaasabadda ugu habboon ee kor loogu qaadayo wacyiga jasiiradaha oo ah meesha fasaxa ugu habboon oo riixaysa iibinta fasaxa.
Club Med ayaa sidoo kale xaqiijisay kororka ballansashada saddexda bilood ee ugu dambeeya 2021 iyo simistarka koowaad ee 2022. “Marka la eego isbeddelka hadda jira, Club Med waxay filaysaa inay kordhiso mugga marka loo eego xilligii pre-Covid horraantii qeybtii hore ee 2022. Tani waxay sidoo kale u mahadcelineysaa hal -abuurnimo taxane ah oo ay Club Med isku diyaarinayso inay suuqa ka bilowdo iyo maalgelinta ku jirta Ururinta Med Med Exclusive, oo ay ku jirto Seychelles. Muhiimadda kala -soocidda Uruurinta Naadiga Med Med waxay korodhay 15% marka la barbar dhigo 2 sano ka hor oo hadda waxay ka dhigan tahay 30% wadarta iibka. Maaddaama COVID-19 uu beddelay caadooyinkii safarka, macaamiishu hadda waxay raadinayaan asturnaan iyo tas-hiilaad leh meelo bannaan oo ay ku neefsan karaan xorriyadda bannaanka, ”ayay tiri Marwo Anne-Laure Redon.
Talyaaniga ayaa muddo dheer ka mid ahaa suuqyada dalxiiska ee Seychelles wuxuuna ahaa suuqii afaraad ee ugu sarreeyay meesha laga soo galo, oo dhalisay 27,289 qof oo yimid 2019 kahor bilawga COVID, laakiin hoos ugu dhacay 2,884 sanadka 2020 maadaama COVID iyo xayiraadaha safarka ay qabsadeen Talyaaniga. Laga bilaabo Oktoobar 10, 2021, 1,029 booqde ayaa u safray Seychelles iyagoo ka yimid Talyaaniga.